Legal Notice - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Vision Laser Kucheka Machine
Flatbed Laser Kutema Machine
CO2 Galvo Laser Muchina
Dhijitari Laser Die Kucheka Muchina
CO2 Laser Cutter wamabwe
Metal Sheet Kutema
Dual Metal Sheet & Tube Kucheka
Tube / Pipe Laser yekucheka Machine
Label, namira, tichifungisisa Tape
Fashion uye Clothing
Laser Cutting Leather nokuda Shoes
Kapeti, Mat & dhende Cutting
Sei Golden Laser
Website iyi anazvo, akakwanisa uye nekugadzirwa Wuhan Golden Laser CO., LTD. (Abbr. Golden Laser). You vanofanira kuverenga mashoko aya kushandiswa usati kurishandisa. Unogona chete Surf dandemutande iri pasi ezvinhu kugamuchira mashoko ichi.
kugutsikana vose website iyi dziri chinangwa pachake kwete zvebhizimisi kushandisa chete. Chero Copyrights uye chiziviso kubva kuonana chinofanira kuremekedzwa nemi. You havabvumirwi aongorore, kutevedzera muzvizivise, kuratidza izvi anogutsikana kuti zvebhizimisi chinangwa. Zvinotevera maitiro anofanira hazvitenderwi: kuisa ichi padandemutande tigutsikane dzimwe Matandira uye nevezvenhau platforms; kunze komutemo mashandisirwo kuti kanganisa Copyrights, Logo nezvimwe pamutemo nemiganhu. Zviri nane vanodimbura zviito zvose kana iwe vasingabvumirani pamusoro nemitemo.
Izvi Website mashoko aripo chinangwa kushandiswa chaiyo uye haina nebumbiro chero nzira. Hatigoni kuva nechokwadi Mhedziso rakarurama uye integrality kwayo kugutsikana riri pasi kuchinja pasina chiziviso. Kuziva zvakawanda pamusoro chigadzirwa yedu, software uye basa sumo, unogona kutaura naye mumiriri kana mumiririri varehwa Golden Laser panzvimbo yenyu.
ruzivo chero iwe pasi kana neindaneti kwatiri Via website iyi haisi sechinhu zvakavanzika uye asina oga kodzero. Golden Laser uchabereka hapana mutoro pamusoro ruzivo urwu. Kana pasina kuzivisa pachine, iwe uchava defaulted kubvumirana zvinotevera mashoko: Golden Laser wake munhu mvumo nekodzero kushandisa yeGmail.END_STRONG kwakaita mashoko, akadai data, mufananidzo, rwezuva uye inzwi kubudikidza kukopa, uye kundizivisa, rokubudisa uye saka pamusoro. Hatina basa chero tsamwisa, kwokuchera, kana majee Posting akaita shoko mapuranga kana zvimwe Interactive Features yacho Site. We kuchengetera kodzero nguva dzose pachena chero mashoko tinotenda zvakakodzera kugutsa chero mutemo, mitemo, kana hurumende chikumbiro, kana kuti kuramba kuposita kana kubvisa chero mashoko kana zvinhu, rose zvaro kana kuti chikamu, kuti hwedu chete maonera vari kukodzera, kunaka kana zvaipesana Terms idzi Service.
Tichava kodzero, asi hapana mutoro, kuongorora zviri mashoko mapuranga kana zvimwe nyaya dzi- kuti asarudze zvaidiwa chibvumirano ichi uye mumwe anodawo mitemo tinosimbisa. Tichava kodzero yedu bedzi kungwara kuti aongorore, vanoramba kuposita, kana kubvisa chero zvinhu pasi kana Posted on shoko mapuranga kana zvimwe dyidzana zviri nzvimbo. Kunyange zvakadaro kodzero iyi, mushandisi kuchagara kungovimba kukonzera zviri mashoko avo.
You vanofanira kutevedza chibvumirano yedu paunenge kudhanilodha Software inobva website iyi. You havabvumirwi kukopa navo usati kugamuchira mashoko ose uye ezvinhu.
Third Part Sites
Zvimwe zvikamu Site anogona kupa Links kune nzvimbo yavose rechitatu, apo ungakwanisa kutenga mhando paIndaneti dzakawanda siyana mishonga uye mabasa kuti inopiwa kumapati rechitatu. Hatina mhosva unhu, yakarurama, timeliness, kuvimbika, kana chero chimwe chinhu chipi chigadzirwa kana basa zvaipiwa kana inopiwa kupati wechitatu. njodzi All zvinoberekwa vhura bato rechitatu nzvimbo vanofanira kutakura woga.
Uchibvuma kuti kunyange isu kana edu Affiliates kana yechitatu Bato site rinobatsirwa vane basa chero kukuvadza kuti iwe yokukanganisa, uye hamungazofadzi vanosimbirira chero maruramiro kutirwisa kana navo, kunobva kutenga yako kana kushandisa chero zvigadzirwa kana mabasa edu nzvimbo.
Website redu wakashanda kubudikidza Product Promotion Department of Golden Laser. Golden Laser hakuvimbisi kuti zviri nzvimbo iri rinoshandisirwa vanhu kunze China. Haufaniri kushandisa nzvimbo kana ekisipoti faira nokusamuteerera Export Mutemo Chine. Imi wakasungwa nomurairo yenyu kana vhura nzvimbo iyi. mazwi aya uye mamiriro ezvinhu dzinotungamirirwa Chinese mitemo Nharaunda Yaitongwa.
Tinogona, chero nguva uye pasina cherechedzai, misa, kukanzura, kana vanodimbura kodzero yako kushandisa nzvimbo. In zvinoitirwawo kuturika, kukanzura, kana kumisa, iwe hauchafambi mvumo kuvhura chikamu Site. Mune chiitiko chipi kuturika, kukanzura, kana kumisa, uku kwakaitwa iwe pakureva zvinhu paIndaneti kubva panzvimbo, uye Disclaimers uye kuitwa munataisireva kusimuka Terms izvi mubasa, anofanira kurarama.
Golden Laser ndiye vanozivikanwa Wuhan Golden Laser CO., LTD. Product Mazita Golden Laser vanopiwawo sechinhu vakanyorwa vanozivikanwa kana pasi-kushandisa vanozivikanwa. Mazita Products uye makambani kusimuka panzvimbo ino vari dzarwo pachavo. You hazvibvumirwi kushandisa mazita aya. Controversy pamhemberero kushandisa nzvimbo iyi achagadziriswa nhaurirano. Kana achiri hazvigoni kugadziriswa, zvichava pasi vanhu kudare Wuhan pasi poMutemo Vanhu vaJehovha Republic of China. Dudziro chiziviso ichi uye kushandisa ichi yepaIndaneti iri aitwa Wuhan Golden Laser CO., LTD.
Chiono Laser Cutter
Dhijitari Laser Die Kutemwa
Diki CO2 Laser Cutter
Label, namira, tichifungisisa matepi
Mafashoni & Zvipfeko
Kapeti, Mat & dhende